Anisan’Ireo Endrika Sary Sokitra Vita Amin’ny Ranomandry Nasongadina Tao Amin’ny Fetiben’ny Ranomandry Ao Sapporo I Trump Sy Ny Pen-Pineapple-Apple-Pen · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Febroary 2017 8:05 GMT
Fanazavana: ny Filoha Trump, paoma sy penina tao amin'ny Fetiben'ny Ranomandry tao Sapporo. Pikantsary avy amin'ny ANN News fantsona YouTube ofisialy.
Manamarika ny iray amin'ireo hetsika lehibe indrindra amin'ny ririnina ao Japana ny volana Febroary: ny Fetiben'ny Ranomandry ao Sapporo . Efa ho tapa-bolana izay, nampiantrano sary sokitra goavana vita amin'ny ranomandry ary ahitana fialamboly amin'ny andro ririnina ihany koa ny toerana roa ao Sapporo, anisan'izany ny faritra lehibe iray fialamboly ao afovoan-tanàna .
Sapporo no tanàna lehibe indrindra any amin'ny nosy avaratra ao Hokkaido. Olona roa tapitrisa raha kely indrindra no mitsidika ny fetibe isan-taona, mba haka sary ho alefa ao amin'ny media sosialy.
Matetika maneho ny kolontsaina pop ankafizina fatratra ny sary sokitra vita amin'ny ranomandry izay manasongadina ny fetibe , ary tahaka izany ny tamin'ity taona ity . Samy maneho imbetsaka ny Filoha Amerikana Donald Trump sy “PPAP” (Pen-Pineapple-Apple-Pen) na (Penina-Mananasy-Paoma-Penina ) tao amin'ny fetibe tamin'ity taona ity ny lahatsary mampihomehy iray nalaza be nataon'ny mpanao hatsikana Japoney PIKOTARO , araka ny mpisera Twitter iray :
Nahoana no misy sary sokitra penina mananasy paoma penina telo
Niseho tao amin'ny toerana roa ny fetibe, Boulevard ao Sapporo ny iray amin'ireo, izay tonga hatrany afovoan-tanàna.
6 Febroary , 1:30 ka hatramin'ny 2 atoandro .
Manomboka ny fampitàna mivantana ny Fetiben'ny Ranomandry ao Sapporo faha 68 izay fanao isan-taona .
Goavana amin'ny ankapobeny ireo sary sokitra sy ny fialamboly, ary maharitra herinandro na roa eo ambanin'ny maripana latsaky ny aotra .
Tsy ho ela dia hanomboka ao amin'ny Lohalambon'ny Fiarahamonina ao Sapporo ny Fetiben'ny Ranomandry ao Sapporo.
Raha i Donald Trump no foto-kevitra selfie tena tian'ny olona, dia misy ihany koa ny sary sokitra isan-karazany hafa azo jerena ao:
“Fiampitan-Kolontsaina manerana izao tontolo izao” (Trump sy ny PPAP) ary ny feon'ny pikantsary selfies. Manomboka ny 6 Febroary ny Fetiben'ny Ranomandry ao Sapporo .
Hitako tany amin'ny Fetiben'ny Ranomandry ao Sapporo io.
Manasongadina ny fahafahana manandrana ny tsiron-tsakafon'i Sapporo manokana ao an-toerana ihany koa ny fetibe , anisan'izany ny ondry natsatsika antsoina hoe “Genghis Khan.”
( ‘-`) ..oO Efa henonareo ve? Manomboka androany ny Fetiben'ny Ranomandry ao Sapporo. Sady misy sary sokitra marobe vita amin'ny ranomandry ao no misy fandrosoana sakafo “Genghis Khan” natsatsika vao mafana. Tongava ary ankafizo!
Ny sary sokitra ranomandry no tena sary fototry ny fetibe, ahitana lohahevitra Star Wars mihitsy aza ny sasany tamin'izany tamin'ity taona ity:
Nampian'ny Tafi-Piarovantena Japoney (JSDF) izay manana toby maro lehibe ao Hokkaido ny ankamaroan'ny asa izay nilaina fametrahana ranomandry goavana kokoa . Fifankazarana kely amin'ny fifandraisana amin'ny vahoaka ho an'ny JDSF ny mandray anjara amin'ny Fetiben'ny Ranomandry ao Sapporo ary zava-misy tsy takona afenina izany:
A: Nahoana no mandray anjara ao amin'ny Fetiben'ny Ranomandry ao Sapporo ny Tafika Miaro Tena Japoney ?
B: Tsy mandray anjara izahay! Manao fanazarantena izahay!
B: Manazatra tena amin'ny fanorenana manda izahay !
A: Inona ??
B: Manazatra tena amin'ny fanorenana manda izahay!
A: Ah ….
Mitana anjara toerana lehibe ihany koa ny JDSF amin'ny fanampiana fandravana ny fanorenana ranomandry rehefa mifarana ny fetibe isan-taona.
Raha manomboka rahampitso (1 Febroary 2017) ny Ranomandry Matsuri ao Sapporo, dia tsy hifarana amin'ny 12 Febroary ilay fety; ny 13 Febroary angamba no tena mampientanentana indrindra rehefa handrava ny zava-drehetra ny Tafi-Piarovantena Japoney .
Azo jerena ato ny antsipiriany bebe kokoa momba ny fetibe isan-taona. Hita amin'ny alalan'ny fikarohana ao amin'ny Twitter sy any amin'ny sehatra media sosialy maro ny sary bebe kokoa amin'ny alalan'ny fampiasana ny tenirohy さっぽろ雪まつり.